ထားဝယ်သားများ ဘာလုပ်ကြမလဲ ~ မြိတ်ပုလဲမြေ
11:40 AM သတင်3းcomments
Facebook website စာမျက်နှာတွင် https://www.facebook.com/sayazaw.zawthura တွင်ဖတ်ရသည့် ဖြစ်စဉ်အား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် သိရှိသမျှ ရှင်းလင်းခြင်း
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်
ထားဝယ်မြို့၊ ကမြောကင်းလမ်းရှိ ၀န်ကြီးများ အိမ်ရာ အကြား ထားဝယ် ဒေသခံများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းနေ ဒေသခံ ပြည်သူ များ၏ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြင့်စွာ ကုသနိုင်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်၍ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုပေး ထားသည့် မြေယာပေါ်တွင် တည်ဆောက် လျက် ရှိသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဆေးရုံ စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင် အနီးတွင် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြစ်စဉ် တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။
သို့အတွက် ဖြစ်စဉ်အမှန်အားသိရှိစေရန်နှင့် ယင်းမြေရာဇ၀င်/ လယ်သမားများဘ၀ လုံခြုံမှု အတွက် စုံစမ်းသိရှိရသမျှကို ဖော်ပြအပ်ပါတယ်-
(က) ဖြစ်စဉ်ပါ မြေမှာ ၁၉၇၃ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့(စနေနေ့)၊ ၁၃၃၄ခု၊ တပေါင်းလပြည့် ကျော် ၆ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ ပြန်တမ်း၊ အပိုင်း(၂)၊ အမှတ်(၁၀၇၃)တွင် ထားဝယ်မြို့ ဧရိယာကို ရပ်ကွက်(၁၅)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပြီး မြို့၏ နယ်နိမိတ် အလားအလာကို အရှေ့(ဗျောတောဝချောင်း၊ ပေါက်တိုင်း ချောင်း)၊ အနောက်(ထားဝယ်မြစ်)၊ တောင် (ဘုမ္မော်တောင်ကွင်း၊ မီးကျောင်း တက်ကွင်း၊ ကူးတို့ အနောက်ကွင်း)၊ မြောက် (ထားဝယ်မြစ်ထန်းတော) စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်၍ ဤမြေသည် ၁၉၇၃ ကာလကပင် မြို့မြေ အဖြစ် တည် ရှိ နေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ်ကိုပြန်ကြည့် လျှင် မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ ခေတ်၊ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးခေတ်၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ခေတ် စသည့် ခေတ်(၃)ခေတ် (အစိုးရ (၃)ဆက်)ပင် ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ (ယင်းခေတ်များ၏ မြေယာဥပဒေကို သိရှိ လေ့လာခဲ့သင့်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်ပါက ဥပဒေပြင်ပမှ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်နေသူများဖြစ်မည်ကို ချင့်ချိန် သင့်ကြောင်း)
(ခ) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၃)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည် ဆောက်ရေး အဖွဲ့၏ ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃/၉၀) ဆုံးဖြတ်ချက် အပိုဒ်(၃၅)အရ ယင်းမြေမှာ လယ်ယာ မြေနိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေး ဥပဒေ အရ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့်(လန/၃၉) ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ယင်းမြေဧရိယာ များပေါ်တွင် ယင်းဥပဒေ အရ မည်သည့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမျှ မဆောင် ရွက်နိုင်တော့ကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပါက ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ(၄၀)အရ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ (အမှန်ဆိုပါမူ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ကြာ ကျူးကျော် ထွန်ယက် စိုက်ပျိုး စားသောက်နေကြ သူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေသည် စာရွက် မဟုတ်ကြောင်း)
(ဂ) သို့ရာတွင် ယင်းသို့ မြို့မြေအဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ် ထားပြီးဖြစ်သည်ကို မသိ နားမလည်သည့် သူများအား အသုံးချ၍ ဆန့်ကျင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းအချို့၊ လူပုဂ္ဂိုလ် အချို့မှ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့် ထားဝယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အဟန့် အတားဖြစ်စေရန် နောက်ကွယ်မှ ပံ့ပိုးမှု အပြည့်ဖြင့် လိုက်လံဆောင်ရွက်နေ ခြင်းဖြစ် ကြောင်း။
(ဃ) ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နေသူ များသည် ၁၉၇၃ခုနှစ်၊ မြို့မြေအဖြစ် သတ်မှတ်စဉ်တွင် လည်း ကောင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း မှတ်တမ်း တွင်ပါဝင်သူများ မဟုတ်ကြကြောင်း၊ အထက် အပိုဒ်(က)ပါ ပြန်တမ်းတွင် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း ကို ယင်း လယ်သမား သမဂ္ဂမှ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ နှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်း များအား ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း သည် စာရွက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေမှာ စာရွက် သာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် မညီသည့် ဆောင်ရွက်မှု များသည် ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာ ရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်ရုံ သာမက ထားဝယ်ဒေသခံပြည်သူ များ၏ အကျိုး စီးပွား၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို မလိုလားသည့် အသွင်ကို ယူနေခြင်းဖြစ်သည်ကို ၄င်းတို့၏ ပြောစကားများ အရ လေ့လာ တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
(ဂ) စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့ပိုင် လမ်းမဘေး ထန်းပင်များအား (လယ်သမားသမဂ္ဂ၊ ဥက္ကဌ) ဆိုသူမှ ၄င်းပိုင်သည်ဟု လိမ်လည် ပြောဆိုလျက် ပိုက်ဆံများယူပြီး လမ်းဘေးတွင် ဓနိမိုး၊ ၀ါးခင်း တဲငယ်ထိုးစေကာ တစ်ခြား ဒေသမှ ချို့တဲ့သူများကို ခေါ်ယူလျှက် ထန်းရည် ဆိုင်ဖွင့် တရားမ၀င်ရောင်းချစေပြီး ၄င်း၏ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် အမြတ်ထုတ် ခေါင်းပုတ်ဖြတ်လျက် ရှိကြောင်း။ ယင်းသို့ ထန်းရည် ရောင်းချရန်အတွက် ယစ်မျိုး လိုင်စင်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း၊
(ဃ) ယင်းလယ်သမား သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဆိုသူသည် မကြာမီကာလအတွင်း ကလည်း မသိနား မလည်သည့် သူများအား စုစည်းကာ ကမ်းနားလမ်းရှိ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ယာရှေ့ လမ်းအား ပိတ်ဆို့ပြီးကားများ/ ဆိုင် ကယ်များအား တားမြစ်ကာ ဆိုင်ကယ် စီးနင်းသူများ အား ဆွဲချ/ ကားပေါ်မှ စီးနင်း လာသူများအား ဆွဲချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကာ ဥပဒေမဲ့ ရမ်းကားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း။
(င) သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဥပဒေနဲ့ မညီသည့်လုပ်ရပ်များကို မလုပ်ရန် အကယ်၍ အုပ်စုဖွဲ့စီတန်း လှည့်လည်မည်ဆိုပါက ဥပဒေနဲ့ အညီပြုလုပ်ရန် အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့သော်လည်း လိုက်နာမှု မရှိဘဲ ၄င်းတို့သမဂ္ဂ၏ နောက်တွင် ၄င်းတို့နောက်တွင် ဆရာရှိသည်/ အဘရှိသည်ဟု ဆိုကာ ဥပဒေနဲ့ မညီသည့် လုပ်ရပ်များကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း။
(စ) ယင်းသို့ ဒေသခံ များအား စုရုံးပြီး ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေး နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်စေသည့် လုပ်ရပ်များကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်း စွာ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသည့် ဒေသခံများ အားနည်း မျိုးစုံ သုံးပြီး သွေးထိုးသပ်လျှို နေခြင်းစသည့် လုပ်ရပ်များကို ဥပဒေမဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်လျက် ရှိသဖြင့် ၁၉၇၃ ခုနှစ် မြို့မြေ သတ်မှတ်စဉ်က လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် လယ်သမား မိသားစုများအား စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ပြီး ထားဝယ်မြို့တော် ခန်းမတွင် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ ယင်းအမွေဆက်ခံသူများ အားတွေ့ဆုံ၍ မြို့မြေအတွင်းတွင် မြေနေရာများ အသီးသီးချ ထားပေးခဲ့ကြောင်း။
(ဆ) ယင်းသို့ မြေနေရာချ ထားပေးခဲ့ခြင်းမှာလည်း မြေအစားပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ… မိမိဒေသရှိ ဒေသခံများ အပေါ် စာနာထောက်ထားသော အားဖြင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ပြည်သူအကျိုး/ ဒေသ အကျိုးရှေ့ရှုလျက် ချထား ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။
(ဇ) ယင်းသို့ မြေယာများ ချထားပေးမှုကို ဆူပူလိုသူ တစ်စုမှ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကာ ယင်းသို့ တရားဥပဒေနဲ့ မညီသည့် လုပ်ရပ်များကို အကြိမ်ကြိမ် ဖန်တီးနေလျက် ရှိကြောင်း။ ဥပဒေအရ ကြည့်ပါမူ လယ်ယာမြေသည် နိုင်ငံတော်ပိုင် ဖြစ်၍ ၁၉၇၃ခုနှစ်မှစ၍ မြို့မြေ အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်တွင် အခြားနည်း အသုံးပြု ခွင့်အရ ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်မှ စ၍ အစိုးရပိုင်မြေ၊ မြို့မြေအဖြစ် သက်ရောက် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆူပူသူများသည် အနှစ် (၂၀)ကျော် ကျူးကျော်သူ များသာဖြစ်ပါကြောင်း။
(ဈ) မည်သည့် အကြောင်းအရာ မဆို အမှန်သိရှိလိုပါက တာဝန်ရှိသူများကို မေးမြန်းရန် လိုကြောင်း၊ မသိ နားမလည်သည့် သူများကို မသိသူများမှ လူတတ်ကြီး လုပ်၍ အစိုးရအဖွဲ့အား ယခုကဲ့သို့ နည်းမျိုးစုံ၊ နေရာမျိုးစုံမှ စော်ကားနေခြင်းမှာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုးသားစွာ နေထိုင်သည့် ထားဝယ်သားများအား လူရိုင်းများ အသွင်ဖြစ်စေရန်နှင့် ထားဝယ်ဒေသ အေးချမ်း တည်ငြိမ်မှုကို မလိုလားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်း အချို့မှ သွေးထိုး သပ်လျှို ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊
ထိုကြောင့် ထားဝယ်မြို့ ကမ်းနားလမ်းရှိ ၀န်ထမ်း အဆောက်အအုံများ၊ ၀န်ထမ်း အိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ထားသည့် မြေနေရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပမာပေးရမည် ဆိုပါက ( ရိုင်းရင်သီးခံပါ) သမီးရည်စား နှစ်ဦး တွေ့ဆုံစဉ် ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို သနားလို့ (ပါး)ပေးကိုင်တာ.. ကောင်လေးက (………)ပါ ရန်ရှာသည့် သဘောဖြစ်နေကြောင်း ဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိသည့် မည်သူမဆို သိရှိနိုင် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထားဝယ်သားများ အနေဖြင့် မိမိဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မလိုလားဘဲ မိမိကိုယ်ကျိုး စီးပွားအတွက် မတရားရ လိုမှုများဖြင့် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များ အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်နေမှုကို ထားဝယ်သား ၀န်ကြီးချုပ်၏ မျက်နှာဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း မပြုဘဲ သီးခံ ခွင့်လွတ်နေခဲ့ သည်ကို နားမလည်ဘဲ ထားဝယ်သား ၀န်ကြီးချုပ် ဘာလုပ်မလဲ သိချင်သည်ဟု မေးမြန်းချက် အပေါ် ကဲ ထားဝယ်သားတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲဟု အကြံပြုပေးရန်နှင့် Rule of Law ဆောင်ရွက်နေ သည့်ခေတ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဥပဒေမဲ့ လုပ်သူတစ်စုတို့၏ လုပ်ရပ်အကြား အကြံပြုပေးနိုင်ပါရန် သိသမျှကို ဖော်ပြလိုက်ရ ပါသည်။
yarzar soe said...
" ထားဝယ်သားတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ " ဟု "ထားဝယ်သားများအကျိုးလိုလားသူ" မှ ရေးသားပြီး မြိတ်ပုလဲမြေ ၀က်ဆိုဒ်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကို အများပြည်သူသိရှိစေရန် မေးခွန်းများဖြင့် ပြန်လည်မေး မြန်းလိုက်ပါသည်။ ……
( အဆိုပါမေးခွန်းများကို ထားဝယ်သားများအကျိုးလိုလားသူ မှ ကိုးကားစရာ ဥပဒေများဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးစေလိုပါတယ်)
ယခုတလော ထားဝယ်မြို့၊ ကမြောကင်းလမ်းရှိ လယ်ယာမြေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များနဲ့ လယ်သမားများ ပဋိပက္ခဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာများ၊ သတင်းဌာနများ၊ ဂျာနယ်များတွင် ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဖက်မှ ၄င်းလယ်များသည် ၁၉၇၃ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ (စနေနေ့) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းအရ မြို့မြေဖြစ်ကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၃)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃/၉၀) ဆုံးဖြတ်ချက် အပိုဒ် (၃၉) အရ ယင်းမြေမှာ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး ဥပဒေအရ လယ်ယာမြေ ကို အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့်(လန/၃၉) ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုသာ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မေးမြန်းလိုသည်မှာ -
(၁) မြို့မြေအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ပြန်တမ်းသည် ဥပဒေအရ မြေယာသိမ်းသည့် အမိန့်ပြန်တမ်း ဖြစ်ပါ သလား ?
(၂) အများသူငှာ သိအောင်ကြေညာရမည့် လန/၃၉ မြေသိမ်းပြန်တမ်းကို
အဘယ်ကြောင့်မကြေညာ သနည်း ?
(၃) အဆိုပါလယ်မြေများကို သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်သည်ဆိုပါက မြေသိမ်းအမှုတွဲကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖြင့် ပြည်သူအများသိရှိရန် မည်သည့်အချိန်တွင် ကြေညာမည်နည်း။
(၄) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၃)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃/၉၀) ဆုံးဖြတ်ချက် အပိုဒ် (၃၉) အရ သိမ်းဆည်းထားပီးဖြစ်သည်ဆိုပါက အဆိုပါ မြေသိမ်းဥပဒေနှင့်အညီ သိမ်းယူပြီးဖြစ်ပါသလား?
(၅) အဆိုပါ သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေများသည် ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်လုပ်ကိုင် စားသောက်လာ သည့် လယ်သမားများအတွက် အိမ်ယာမြေအဖြစ် ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပဲ၊ အစိုးရနှင့်ခရိုနီများ အတွက်သာ အိမ်ယာမြေ အဖြစ်ပြုလုပ်ခွင့် ရှိပါသလား ?
(၆) အနှစ် (၂၀) ကျော်ကြာ ကျူးကျော်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးစားသောက်နေကြသူများဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ထားသည်မှာ - ၁၈၇၆ ခုနှစ် အောင်မြန်မာပြည်မြေနှင့် အခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ - ၇ အရ ကို သင်သိပါသလား ?
(၇) ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို အစိုးရတာဝန်ရှိသူများမှ မတရားဖျက်ဆီးခွင့်ရှိပါသလား?
(၈) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပြောသော ပြည်သူဗဟိုပြုဆိုသည်မှာ ပြည်သူများကို မောက်မာရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကို ဆိုပါသလား?
မှတ်ချက် ။ ။ ပြည်သူတွေ ဥပဒေနားမလည်ဘူးဆိုပီး ဖြီးဖြန်းဖြေဆိုခြင်းသည်းခံပါ။
ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ဝေ့၀ိုက်ပြီး အဖြေမပေးပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုချင် ပါတယ်။
သင်ဖြေဆိုပြီးပါက ထားဝယ်သားများဘာလုပ်မည်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။